Ngathi | Shandong Dingtaisheng Oomatshini Technology Co., Ltd.
I-DTS isekwe e-China, eyandulelayo yasekwa ngonyaka ka-2001. I-DTS ngomnye wabanikezeli abanempembelelo kwezentengiso nakwiziselo zeshishini lokuvelisa inzalo e-Asiya.
Ngo-2010, inkampani yatshintsha igama layo laba yi-DTS. Inkampani igubungela indawo iyonke ye-1.7 yezigidi zeemitha zesikwere kwaye, ikomkhulu liseZhucheng, kwiphondo laseShandong, inabasebenzi abali-160. I-DTS lishishini eliphakamileyo lobuchwephesha elidibanisa ukubonelelwa kwemveliso eluhlaza, imveliso yeR & D, inkqubo yoyilo, imveliso kunye nemveliso, ukuhlolwa kwemveliso egqityiweyo, ukuthuthwa kobunjineli kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.
Inkampani ine-CE, EAC, ASME, DOSH, MOM, KEA, SABER, CRN, CSA kunye nezinye izatifikethi zamazwe aphesheya. Iimveliso zithengisiwe kumazwe angaphezu kwama-35 nakwimimandla, kwaye iDTS ineearhente kunye neofisi yokuthengisa eIndonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Arabia, Myanmar, Vietnam, Syria, njl. I-DTS iphumelele ukuthembela kwabathengi kwaye igcina ubudlelwane obuzinzileyo bokubonelela kunye neemfuno ezingaphezu kwe-130 zeempawu ezaziwayo zasekhaya nakwamanye amazwe.
Uyilo kunye neMveliso
Ukuze sibe luphawu oluphambili kushishino lokucoca inzala ngokutya kunye neziselo yinjongo yabantu be-DTS, sinamava kunye neenjineli zoomatshini abanamava, iinjineli zoyilo kunye neenjineli zophuhliso lwesoftware yombane, kuyinjongo yethu kunye noxanduva lwethu ukubonelela abathengi bethu ngeemveliso ezilungileyo , iinkonzo kunye nendawo yokusebenza. Siyayithanda into esiyenzayo, kwaye siyazi ukuba ixabiso lethu lilele ekuncedeni abathengi bethu ukuba benze ixabiso. Ukuhlangabezana neemfuno zabathengi abohlukeneyo, siyaqhubeka nokwenza izinto ezintsha, ukuphuhlisa kunye nokuyila izisombululo ezilungiselelwe abathengi.
Sineqela lobuchwephesha eliqhutywa yinkolelo efanayo kunye nokufunda rhoqo kunye nokwenza izinto ezintsha. Amava eqela lethu atyebileyo aqokelelweyo, ukusebenza ngononophelo kunye nomoya ogqwesileyo kuphumelela ukuthembela kwabathengi abaninzi, kwaye sisiphumo seenkokheli ezinokuqonda, ukuqikelela, ukuqhuba imfuno yentengiso ngezicwangciso kunye nokusebenza neqela ukukhokela ezintsha.
I-DTS izimisele ukubonelela abathengi ngezixhobo ezisemgangathweni ezisemgangathweni, siyazi ukuba ngaphandle kwenkxaso yezobuchwephesha elungileyo, nokuba ingxaki encinci inokubangela ukuba yonke imveliso ezenzekelayo iyeke ukusebenza. Ke ngoko, sinokuphendula ngokukhawuleza kwaye sisombulule iingxaki xa sinika abathengi iinkonzo zangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa kunye neenkonzo zentengiso. Kungenxa yesi sizathu sokuba i-DTS ihlale ngokuqinileyo kwisabelo esikhulu semarike e-China kwaye iqhubeke nokukhula.
Nceda uzive ukhululekile ukusithumela iimfuno zakho kwaye siya kukuphendula ngokukhawuleza.
Sineqela lobugcisa lobunjineli ukuba silisebenzele malunga nazo zonke iimfuno ezineenkcukacha.
Iisampulu ezingahlawulelwaxabiso zinokuthunyelwa kuwe ngokobuqu ukuze uqonde ngakumbi.
Kwimizamo yokuhlangabezana neemfuno zakho, nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi.
Ungasithumela ii-imeyile kwaye unxibelelane nathi ngqo.
Ngaphezu koko, siyakwamkela ukutyelelwa kumzi-mveliso wethu ovela kwihlabathi liphela ukuze siqonde ngcono umbutho wethu.
Siya kubambelela kumxhasi we-1, umgangatho ophezulu we-1, ukuphuculwa okuqhubekayo, inzuzo kunye nemigaqo yokuphumelela. Xa intsebenziswano kunye nomthengi, sibonelela abathengi ngeyona nkonzo iphakamileyo ekumgangatho ophezulu.